Home Facilities & Services Operation Theater City Hospital Mandalay
City Hospital Vacancies Accouncement
Our hospital will offeracompetitive remuneration package and career development opportunities based on experience and ability. Those interested can send their applications in person within two weeks together with their CVs and2recent passport photos, copies of relevant certifictes, NRC card, labor registration form, and police station recommendation, to the following address.
Bet 65th & 66th Street, Mandalay.
Only short-listed applicants will receiveareply.
Emergency Out Patient Department
X Ray, CT, MRI (Imaging Department)
We havearange of room sizes available to fulfill our patients’ requirement, including one bedded rooms, two bedded rooms, family room, VIP rooms and so on.
All the rooms consist ofafowler’s bed, which has side rails serving as protection for the patient especially in patients with fall risk, as well as wheels for convenient patient transfer in emergency circumstances.
Each of the patients’ rooms is also equipped with oxygen delivery tubes, suction unit for convenient usage.
The patients can activate the Nurse Call Bell System, to seek immediate medical attention from our nurses and doctors.
For patients needing intensive care, we also have an Intensive care unit, which is equipped with defibrillator, ventilator, bedside patient’s monitor and other necessary facilities.
Additionally, asahigh quality private hospital, our rooms according to the type of patients room consists the following room service and facilities.
-24 Hour Satellite TV and power supply
-Furnished patient room (includingafridge)
- Bathroom (toilet and shower with hot and cold water)
-Disinfected walls and floors
Our in-patient facilities to aim to give our patientsacomfortable hospital stay in addition to the high standard healthcare.
၄။ အထူးခန်း စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားများရှိပါသည်။
အခန်းအားလုံးတွင် လူနာများနှင့်အထူးသင့်တော် သော fowler's bed များ ထည့်ပေးထားပါသည်။ လူနာကုတင်တွင် ဘီးတပ်ဆင်ထားသဖြင့် အရေးပေါ် လူနာရွှေ့ပြောင်းရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ကုတင်တွင်အကာအယံ ပါရှိသဖြင့် သတိမေ့နေသော လူနာများအတွက် မတော်တဆထိခိုက်မှုများမှကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို လူနာများခံစားရရှိနိုင်ပါသည်။
လူနာအတွက်လိုအပ်သော အောက်ဆီဂျင်ပေးခြင်း၊ ချွဲစုပ်ခြင်းများကိုအလွယ်တကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ပိုက်လိုင်းများကို လူနာခန်းထဲ အရောက် တပ် ဆင်ပေးထားပါသည်။
လူနာအရေးကြီးလျှင်ကြီးသလို အရေးပေါ်ဆရာဝန် ဆရာမများအား ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် Nurse Call Bell System များတပ်ဆင်ထားပါသည်။
ထို့ပြင်လူနာနှင့်မိသားစုများ သက်တောင့်သက်သာ နေနိုင်ရန် သီးသန့်လေအေးပေးစက် ၊ ရုပ်မြင်သံကြား နှင့်ဂြိုဟ်တုစလောင်းစက်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ရေနွေးဓါတ်ဗူး နှင့် ရေခဲသေတ္တာများ ထည့်သွင်းတပ်ဆင် ပေးထားပါသည်။
နံရံနှင့်ကြမ်းခင်းများအားနိုင်ငံတကာဆေးရုံအဆင့် အတိုင်း ပိုးမွှားသန့်စင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အခန်းအတွင်းတွင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ဧည့်ခန်းနှင့်ရေအိမ် ထည့်ပေးထားပါသည်။
ထို့ပြင်အထူးကြပ်မတ်ကုသရန်လိုအပ်သောအရေး ကြီးလူနာများ နှင့် အချိန်မရွေးအသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင် သောလူနာများ အတွက် အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းကို လည်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။ အထူးကြပ် မတ်ကုသခန်းတွင် လူနာအသက်ကယ် ကိရိယာများဖြစ် သော နှလုံးနှိုးစက် (Defibrillator)၊ အသက်ရှုအထောက်အကူပြုကိရိယာ (Ventilator)၊ လူနာ၏အခြေအနေကို ၂၄နာရီအချိန်ပြည့် ကြည့်ရှု့မှတ်တမ်းတင်နိုင်သော (Beside Patient's Monitor) များ တပ်ဆင်ပေးထားသည့်အပြင် အခန်း၏အပူချိန်အား ဗဟိုလေအေးပေးစက်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားရှိပါသည်။
အထက်ပါကဲ့သို့လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း ၊ စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း နှင့်ပြည့်စုံစေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်မြို့တော်ဆေးရုံမှ အစစအရာရာ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။
Royal Room Single Room
Special Room Family Room
If you wish to enquire about any medical check-ups at Nyein and City Hospitals, our healthcare personnels from PRC are at your service. Contact us for further details, booking appointments, advice on suitable package or enquiries about check-up results.
HELP LINE - 09-977917522, 09-977917519